Fundo Pro Apk Download 2022 Ho an'ny Android [Nohavaozina] - Luso Gamer
Fundo Pro Apk Download 2022 ho an'ny Android [Nohavaozina]
March 4, 2022 Janoary 13, 2022 by John Smith
Noho izany dia mizara fampiharana maromaro izahay, anisan'izany ny lalao amin'ny tranokalanay. Fa tamin'ny fotoana voalohany nitondranay ity Apk vaovao ity dia ny Fundo Pro Apk. Izay novolavolaina manokana raha jerena ny fahasalamana sy ny fahasalaman'ny olombelona. Ny fampiasana ny mpampiasa finday App dia afaka manefy ny smartwatch amin'ny finday.
Ny fametrahana ny rindranasa dia hanampy ny mpampiasa hahazo mari-pahaizana farany sy azo antoka momba ny hetsika samihafa. Anisan'izany ny Heart Beat, ny dingana rehetra, ny hafatra lavitra sy ny hafatra miditra. Ie, henonao tsara izahay, ankehitriny dia afaka mandray sy mamaky hafatra amin'ny alàlan'ny smartwatch ireo mpampiasa.
Inona no tanjon'ny fampivelarana sy ny fampiasana smartwatches raha manana finday finday avo lenta ny olombelona? Mety ho hafa ny antony fa ny valiny lehibe indrindra dia ny fomba mahomby. Ny sivilizasiôna olombelona dia porofo iray manamarina fa afaka mivoatra miaraka amin'ny fanatsarana ny olombelona.
Mikendry ny fomba marani-tsaina sy ny fahamoran'ny olona. Ireo manam-pahaizana dia nandefa ny smartwatches ho an'ireo olona izay tia mampiasa ny teknolojia farany. Na dia novolavolaina aza ny fitaovana, ahoana no ahafahan'ny mpampiasa mampifandray ilay finday amin'ny finday Android.
Mazava ho azy fa tsy misy rindrambaiko ny hardware dia tsy afaka mandeha. Mikendry ireo mpamorona fomba marani-tsaina namolavola ity fampiharana vaovao ity miaraka amin'ny anarana Fundo Pro App. Izay hanome ny fidirana smartwatch anao ary hampiseho endri-javatra samihafa amin'ny efijery kely.
Raha manana smartwatch hafa ianao ary tsy afaka manamboatra azy amin'ny findainao finday noho ny tsy fahampian'ny ho enti-manana. Aza manahy avy eo satria nitondra ity Apk vaovao ity izahay. Izay tsy hanampy ny mpampiasa hanara-maso fotsiny fa manampy ny olona handray hafatra tafiditra ao anatin'izany ny antso an-tariby.
Inona ny Fundo Pro Apk
Raha ny tena izy dia fampiharana ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana novolavolaina manokana ho an'ireo izay saro-pady tokoa amin'ny fahasalaman'izy ireo. Ny fametrahana ny famantaranandro amin'ny finday avo lenta dia ahafahan'ny mpampiasa mampiseho ny halaviran'izy ireo. Mandritra ny fandehanana na fihazakazahana lavitra.
Ankoatr'ireo safidy rehetra ireo, ireo mpandraharaha dia nampiditra endrika vaovao kokoa ao anatiny. Tahaka ny ora fatoriana, ny dingana rehetra, ny tahan'ny fo, ny statistika ary ny rafitra fampisehoana tsy manam-paharoa. Ho fampivoarana bebe kokoa ireo mpamorona dia mamela ny fahatsapana mikasika ao anaty App.
anarana Fundo Pro
Anaran'ny fonosana com.kct.fundo.btnotification
Android takiana 4.3 ary Plus
Ka ny Apk dia hiparitaka milamina rehefa mihazakazaka amin'ny fitaovana efijery mikasika. Ny endri-javatra faratampony izay tian'ny mpampiasa ho azy dia ny fametrahana ny mombamomba azy sy ny tantaran'ny halaviran-dàlana rehetra voasarona. Midika rehefa misafidy ny bokotra isan-kerinandro ny mpampiasa dia hasehony mandritra ny herinandro ny tantara rehetra.
Ny fananganana Profile dia hitahiry ny tantara feno ao anatin'izany ny cache. Ankoatr'izay, hananganana fifandraisana milamina dia mila Bluetooth.
Midika raha tsy misy Bluetooth dia tsy azo atao ny mametraka fifandraisana eo amin'ny fitaovana. Ka raha te hiaina maimaim-poana ireo fiasa pro rehetra ireo ianao mihoatra ny fametrahana Fundo Pro For Smart Watch.
Maimaimpoana ny misintona ary manolotra fiasa misimisy kokoa.
Ho an'ny configur dia ilaina ny Bluetooth.
Ny fanamafisana ny fitaovana amin'ny alàlan'ny fampiharana dia manolotra Fotoana Torimaso, Fampidiran-doha, Stats ary dingana.
Ankoatr'izay, ny mpampiasa dia afaka manitsy ny singa Temperature.
Ho an'ny fampiasana dia tsy mila fisoratana anarana izany.
Tsy aseho ny doka fahatelo.
Ary ny interface interface dia milamina amin'ny finday.
Raha mikasika ny fisintomana rakitra Apk. Tsy ny mpampiasa Android no afaka matoky ny tranonkalantsika satria ny Apps marina sy tany am-boalohany ihany no atolotray. Mba hahazoana antoka fa nampiala voly ny mpampiasa amin'ny vokatra mety. Mametraka an'io rakitra io amin'ny fitaovana hafa izahay.
Raha vantany vao azontsika antoka fa miasa sy maharitra ampiasaina ilay app. Avy eo dia omenay ao anatin'ny fizarana fampidinana izany. Ho fampidinana ny kinova farany an'ny Fundo Pro Apk. Azafady tsindrio ny manome rohy fampidinana ary hanomboka hisintona ho azy izy io.
Anisan'izany ny fampiharana ara-pahasalamana hafa, ity Apk ity no iray tonga lafatra sy tsara indrindra amin'ny fampiasana. Mandritra izany fotoana izany, ny fampiasana ilay rindranasa raha sendra misy olana dia aza misalasala mifandray aminay. Ary hiverina aminao izahay raha vantany vao voaray ny fangatahanao.
Sokajy Apps, Fahasalamana & Fitness Tags Fundo Pro, Fundo Pro Apk, Fundo Pro App, Fundo Pro Ho an'ny Smart Watch Post Fikarohana
Androzen Pro TPK 2022 Download Ho an'ny Tizen Mobiles [Miasa]
UC Handler Apk 2022 Download Ho an'ny Android [Vaovao]